Côte d’Ivoire : Sehona habibiana ao amin’ny fonja be gadra indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2011 3:48 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, Français, বাংলা, Nederlands, اردو, Italiano, Español, English
Misy video mampikorontana ny fiaraha-monina Ivoriana amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao. Ahitàna ny miaramila midaroka gadra ao amin'ny fonja “Maison d'Arrêt et de Correction” (MACA) izany. Araka ilay olona namoaka ny video, mpomba an'i Alassane Ouattara ireo gadra ireo. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny krizy ara-politia any Cote d'Ivoire, am-polony ireo olona nosamborina tany Abidjan noho ny fironany ara-politika, ary nogadraina ao amin'ny MACA.
Nahatohina ireo mpijery izany video izany. Maneho hevitra i Traore Tidiane ao amin'ny Facebook [Fr] :
“Izany no fahambanian'ny fitondràn'i Gbagbo eo am-baravaran'ny fahafatesana! Iza no niteny hoe tsy mila hery izy?”
Tamin'ny 10 Desambra, Jean-Paul Ney, mpanao gazety Frantsay nampangain'i Laurent Gbagbo ho nikasa hanongam-panjakàna tamin'ny Desambra 2007, dia namoaka tao amin'ny vohikalany “Les grandes oreilles“, video iray nalaina tamin'ny 2008 fony izy notànana tany amin'ny MACA.
Nampiseho fikomian'ireo gadra izany, arahan'ny habibiana ataon'ireo miaramila.
Tamin'ny 17 Desambra 2010, ny andro taorian'ny vono olona nitranga nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpomba an'i Ouattara tany Abdijan, mbola ilay mpanao gazety ihany no niantso ny olona tao amin'ny kaontiny twitter mba hanampy ireo gadra ao amin'ny MACA:
“#civ2010 ho an'ny MACA, iza ao Abidjan no afaka mifamory hitondra sakafo ho an'ny fonja? Tsy mety ny Western Union ho an'ny Repoblikan'i Côte d'Ivoire!”